Vaovao - Ny haben'ny tsenan'ny indostrian'ny mpanova eran-tany dia hihoatra ny 100 miliara amin'ny taona 2020
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny fitakiana tsena fampitaovana herinaratra sy fanapariahana herinaratra manerantany dia mitombo amin'ny ankapobeny.
Ny fanitarana ny toby famokarana herinaratra, ny fitomboan'ny harinkarena ary ny fangatahana herinaratra any amin'ireo firenena vao misondrotra dia hitarika ny tsenan'ny mpanova herinaratra manerantany manomboka amin'ny $ 10,3 miliara amin'ny 2013 ka hatramin'ny $ 19,7 miliara amin'ny taona 2020, miaraka amin'ny taha mitombo 9,6 isan-jato isan-taona, hoy ny andrim-pikarohana.
Ny fitomboana haingana amin'ny fangatahana herinaratra any Shina, India ary Moyen Orient no tena mpamily fitomboana andrasana eo amin'ny tsena mpanova herinaratra manerantany. Ho fanampin'izany, ny filàna fanoloana sy fanavaozana ireo trafo taloha tany Amerika Avaratra sy Eropa dia nanjary mpamily lehibe an'ny tsena.
"Ny GRID any UK dia efa tena mahantra ary amin'ny alàlan'ny fanoloana sy fanavaozana ny takelaka ihany no hahafahan'ny firenena hisorohana ny delestazy. Toy izany koa, any amin'ny firenena eropeana hafa, toa an'i Alemana, dia misy ny fanavaozana ny tambajotra sy ny elektronika. hiantohana ny famatsian-jiro tsy tapaka. "Ka hoy ny mpandinika sasany.
Raha ny hevitry ny matihanina dia misy lafin-javatra roa amin'ny fitomboan'ny tanjaky ny tsena mpanova manerantany. Amin'ny lafiny iray, ny fanavaozana sy ny fanovana ireo mpanova nentim-paharazana dia hiteraka tsena marobe, ary ny fanafoanana ireo vokatra mihemotra dia mety hampiroborobo ny fampandrosoana mahomby amin'ny tolotra sy ny tolotra, ary hisitraka tombony ara-toekarena goavana.
Etsy ankilany, ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana, ny varotra, ny fampiasana ary ny fikojakojana ireo hetra miova herijika sy manan-tsaina no ho lohalaharana, ary ny vokatra vaovao dia azo ihodivirana hitondra fotoana fampandrosoana vaovao ho an'ny indostria.
Raha ny marina, ny indostrian'ny orinasa mpamokatra mpanova dia miankina amin'ny fampiasam-bola avy amin'ny indostria any ambanivohitra toy ny famatsiana herinaratra, tariby herinaratra, metallurgy, indostria petrokimika, lalamby, fananganana an-tanàn-dehibe sns.
Tao anatin'izay taona lasa izay, nahazo tombony tamin'ny fampandrosoana haingana ny toekarem-pirenena, nitombo ny fampiasam-bola amin'ny fananganana herinaratra sy ny tariby herinaratra, ary nitombo be ny filan'ny tsena ny fitaovana fampitana sy fizarana. Antenaina fa ny fangatahan'ny tsena anatiny ho an'ny mpanova sy fitaovana fampitaovana ary fizarana hafa dia hijanona amin'ny haavo avo lenta mandritra ny fotoana lava ho avy.
Mandritra izany fotoana izany, ny ivontoeram-panjakana misahana ny hery misintona sy ny paikadim-pampandrosoana ho an'ny indostrian'ny angovo herinaratra dia misy fiantraikany lehibe, ny tambajotram-pifandraisana automatique ary ny fampiharana ny asa retrofit dia hitarika ny filan'ny tsena mpanova, ny tolo-bidy dia hampitombo ny isan'ny ny tsena mpanova manerantany dia hitongilana mankany Chine, ny fampiharana ireo vokatra manaparitaka vinavina dia antenaina hahazoana vokatra tsara kokoa any Shina.